समाजसेवी श्रेष्ठको स्मृतिमा विद्यालयमा २ लाखको अक्षयकोष स्थापना
गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका–७ बोर्लाङका समाजसेवी स्व. पदमबहादुर श्रेष्ठको स्मृतिमा सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा २ वटा अक्षयकोष स्थापना गरिएको छ ।
अमेरिकामा रहेकी स्व. श्रेष्ठकी छोरी प्रतिमा श्रेष्ठ, ज्वाइ धनीराज श्रेष्ठ र पत्नी बालकुमारी श्रेष्ठका तर्फबाट संयुक्तरूपमा १ लाख १ हजार १०० कोे ‘पदमबहादुर श्रेष्ठ स्मृति टुहुरो जेहेन्दार छात्रवृत्ति अक्षयकोष’ र नाति अभिनव श्रेष्ठका तर्फबाट १ लाख १ हजार १०० कोे ‘गरीब तथा जेहेन्दार दलित छात्रवृत्ति कोष’ स्थापना गरिएको हो ।
विद्यालयमा सोमवार आयोजित कार्यक्रममा परिवारका तर्फबाट उपलब्ध गराइएको सो रकमबाट ती कोष स्थापना गरिएको विद्यालयका प्रधानध्यापक रामचन्द्र पौड्यालले जानकारी दिए । अक्षय कोषबाट प्राप्त हुने ब्याजबाट विद्यार्थीहरू छनोट गरी जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने उनले बताए ।
नेपाली सेनाका जमदारबाट अवकाश समाजसेवी श्रेष्ठको ८२ वर्षको उमेरमा गत असोज १५ गते उपचारका क्रममा काठमाडौं छाउनीस्थित विरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा निधन भएको थियो ।
उनले बोर्लाङको शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका वडाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । गाउँमै स्कुल खोल्नुपर्छ भनी स्थानीय नागरिकलाई जागरुक गराउने अभियानमा जुटेका स्व. श्रेष्ठले २०१६ सालमा विद्यालय स्थापनाका लागि जग्गा दान पनि दिएका थिए ।
माघ १५ बाट विद्यालय खुल्ने